Farriin degdeg ah oo ku socota shacabka Soomaaliyeed (Akhriso Appeal-ka) | Somchess.net
You are here : Somchess.net » wararka » Farriin degdeg ah oo ku socota shacabka Soomaaliyeed (Akhriso Appeal-ka)
Farriin degdeg ah oo ku socota shacabka Soomaaliyeed (Akhriso Appeal-ka)
Posted On Monday, May 16, 2016 By admin. Under wararka
Dalka Soomaaliya oo muddo ka badan 20-sano uu soo gaaray burbur dhinac walba leh, ayaa maanta waxa uu ka soo kabanayaa dhinacyo fara badan, kaddib markii ay u istaageen muwaadiniin leh damiir wadaninimo iyagoo kaashanaya walaalahooda iyo hay’adaha caalamiga ah.
Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya (Somali Chess Federation) ayaa goor dhow qoraal ka soo baxay xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho waxa uu farriin degdeg ah u diray dhammaanba shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan.
Xiriirka Shataraniga ayaa shacabka Soomaaliyeed kuwooda dhaqaalaha heysta inay ka qeyb qaataan bixinta dhaqaalaha ku baxaya ciyaaraha caalamiga ah ee Shataranjiga Adduunka(World Chess Olympic games), bacdamaa aanu xiriirku awoodin inuu iska bixiyo kharajka ciyaartoyda iyo wafdiga ka qeyb galeysa tartankaasi oo ka dhacay magaalada Baku ee wadanka Asarbajan.
Qoraalkaan oo uu ku saxiixnaa Guddoomiyaha Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya Md. Axmed Cabdi Xasan (Wataac) ayaa lagu tilmaamay muhiimadda ay u leedahay qaranka Soomaaliyeed oo xiriirkiisu uu matalo, ayna lagama maarmaan tahay in muwaadiniin kasta uu kaalintiisa ka qaato sidii dalalka caalamka looga dhex muuqan lahaa.
Halkaan hoose ka akhriso warka ka soo baxay Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga:-
« Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya oo munaasabadda 15-ka May awgeed baaq u diray dhallinyarada
Andrey Filatov honored with State Award »